दैलेखमा १ जना सुत्केरीको मृत्यु – Sitalpati
दैलेखमा १ जना सुत्केरीको मृत्यु
पत्रपत्रिका २०७७, १३ भाद्र शनिबार
दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका वडा नं. एक सिराडीकी एक २३ वर्षीया महिलाको लकान्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको लापरबाहीका कारण ज्यान गएको आफन्तले आरोप लगाएका छन् ।
यता, लकान्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. लक्ष्मी रावतले अस्पतालले कुनै पनि लापरवाही नगरेको दाबी गरिन । ‘हामीले नर्मल डेलीभरी गरायौं । बच्चा सकुशल थियो । तीन बजेर १८ मिनेटमा बच्चा जन्मेको हो । त्यसपछि ब्लेडिंग भयो । ब्लेडिंग कम हुने औषधी दिएर हामीले उहाँलाई रेफर गरिदिएका हौं । उहाँको जेठानी, देउरानी र हामी सबैलागेर उहाँको उपचार गरेका हौं । उहाँको बाटैमा निधन भएको दुःखद खबर हामीले पनि सुन्यौं । उनले भनिन् ।’ लोकान्तरबाट